एसिटामिनोफेन बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन अझ राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी समुदाय प्रेस समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट चेकआउट खेलहरु कम्पनी, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एसिटामिनोफेन बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
एसिटामिनोफेन बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हुन् जसले दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्दछन्। तिनीहरू प्रोस्टाग्लैन्डिनहरू अवरुद्ध गरेर काम गर्दछन्, जुन पदार्थ जो चोटपटक वा बिरामी हुँदा धेरै कार्य गर्दछ। इबुप्रोफेनले नोन्सटेरोइड एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआईडी) को रूपमा सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ जबकि एसिटामिनोफेनलाई वर्गीकृत गरिएको छैन विरोधी भड़काउने औषधि ।
ओटीसीको दुखाइ कम गर्ने रूपमा, एसिटामिनोफेन र एनएसएआईडीले टाउको दुख्ने र अन्य साना तथा दुखाइको समान लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छ। एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेन दुबै छोटो अभिनय गर्ने औषधि हुन् जुन दिनभरि धेरै पटक लिनु पर्छ। जबकि दुबै औषधिहरू सामान्यतया औषधिहरू प्रयोग गरिन्छन्, तिनीहरूको साइड इफेक्ट र उनीहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्नेमा केही भिन्नताहरू छन्। एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेनमा पनि बिभिन्न सक्रिय सामग्रीहरू छन् र बिभिन्न तरिकाहरूमा काम गर्दछ।
एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
एसिटामिनोफेन (एसिटामिनोफेन कूपन) - जसलाई ब्रान्ड नाम टाईलेनोलले पनि चिनिन्छ anal एनाल्जेसिक (पीडा रिलीभर) र एन्टिपायरेटिक (ज्वरो रिड्यूसर) औषधि हो। सही तरीकामा जसमा एसिटामिनोफेनले कार्य गर्दछ अज्ञात छ, तर यो COX एन्जाइमको कमजोर अवरोधकर्ता हो भनेर विश्वास गरिन्छ, जुन प्रोस्टाग्लैन्डिन उत्पादनको लागि जिम्मेवार छ। यसले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा दुखाई र ज्वरोलाई कम गर्न पनि काम गर्दछ। मनपर्दैन NSAIDs , एसिटामिनोफेन ओस्टियोआर्थराइटिस र रुमेटोइड गठिया जस्ता दाहक अवस्थाहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्दैन।
इबुप्रोफेन (आईबुप्रोफेन कूपन) एक NSAID हो जुन दुखाइ, ज्वरो, र जलनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इबुप्रोफेनको साझा ब्रान्ड नामहरूमा मोट्रिन र एडविल पर्छन्। एसिटामिनोफेनको विपरीत, आईबुप्रोफेन एक नॉनसेलेक्टिव COX एन्जाइम इनहिबिटर हो जसले गठिया र जोड़ दुखाईबाट पीडा र सूजन कम गर्न सक्छ। COX-1 एन्जाइममा यसको प्रभावहरूको कारण, आईबुप्रोफेनले प्रतिकूल जठरांत्र (GI) प्रभाव पनि गर्न सक्छ।
सम्बन्धित: एसिटामिनोफेन भनेको के हो? | इबुप्रोफेन भनेको के हो?
एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एनाल्जेसिक
Antipyretic Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAID)
ब्रान्ड नाम के हो? Tylenol एडभिल, मोट्रिन, मिडोल, नुप्रिन
मौखिक तरल मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? As50० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार
अधिकतम दैनिक खुराक: 50२50० मिलीग्राम 200 मिलीग्राम देखि 400 मिलीग्राम प्रत्येक4देखि6घण्टा आवश्यकता अनुसार
अधिकतम दैनिक खुराक: १२०० मिलीग्राम
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधिमा दुखाइ वा ज्वरो वा एक चिकित्सकको निर्देशन अनुसार १० दिन सम्म डाक्टरले निर्देशन नगरेसम्म
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र बच्चाहरु months महिना र माथिका वयस्क र बच्चाहरु months महिना र माथिका
आइबुप्रोफेनमा सब भन्दा राम्रो मूल्य चाहिन्छ?
आईबुप्रोफेन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
एसिटामिनोफेन बनाम आईबुप्रोफेनद्वारा सर्तहरू
एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेन दुबै प्रभावकारी छन् दुखाइ राहत जुन एफडीए-अनुमोदित हुन्छ हल्का देखि मध्यम दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्न। हल्का देखि मध्यम दुखाइका उदाहरणहरूमा टाउको दुख्ने, कम्मर दुखाइ, दाँत दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, sprains, र मासिक पेट दर्द शामिल छ।
एसिटामिनोफेन केवल दुखाइ र ज्वरोको अस्थायी उपचारका लागि संकेत गरीन्छ। यद्यपि यसमा गठिया, माइग्रेन, र डिसमेनोरिया (पीडादायी मासिक धर्म) को लागि अफ-लेबल प्रयोगहरू पनि छन्। एसिटामिनोफेन यी अफ-लेबल प्रयोगहरूको लागि अन्य औषधीहरू जत्तिकै प्रभावकारी नहुन सक्छ।
इबुप्रोफेन सामान्य तीव्र दुखाई र ज्वरोको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। गठिया, माइग्रेन, र डिसमेनोरियाबाट पीडा र सूजनको उपचार गर्न पनि यसलाई लेबल लगाईन्छ।
अनुसन्धानले यो पनि देखायो कि एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सकिन्छ पेटन्ट डक्टस धमनीको उपचार गर्नुहोस् शिशु शिशुहरुमा डक्टस धमनी धमनी शिशुको हृदयमा एक प्रमुख रक्त वाहिका हो जुन सामान्यतया जन्म पछि बन्द हुन्छ। यद्यपि केही बच्चाहरूमा यो रक्त वाहिनी खुला रहन्छ र मुटुको जटिलता निम्त्याउन सक्छ। आईबुप्रोफेन (एडविल) वा नेप्रोक्सेन (एलेभ) जस्ता एनएसएआईडीहरू प्याटेन्ट डक्टस धमनीकोशोधकको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ।
सर्त एसिटामिनोफेन इबुप्रोफेन
पीडा हो हो
ज्वरो हो हो
ओस्टियोआर्थराइटिस अफ-लेबल हो
संधिशोथ अफ-लेबल हो
माइग्रेन अफ-लेबल हो
प्राथमिक डिसमेनोरिया अफ-लेबल हो
प्याटेन्ट डक्टस धमनी अफ-लेबल अफ-लेबल
के एसिटामिनोफेन वा आइबुप्रोफेन बढी प्रभावकारी छ?
एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेनको प्रभावकारितामा भिन्नता हुन सक्छ जब ज्वरो र विभिन्न प्रकारका पीडाको उपचार गर्ने। ती दुबै दिन अधिकतम लक्षण राहतको लागि दिनभर धेरै चोटि लिइन्छन्।
एक मा समीक्षा , आईबुप्रोफेन वयस्क र बच्चाहरूमा दुखाइ र ज्वरोको उपचारको लागि एसिटामिनोफेनसँग समान वा राम्रो फेला पर्‍यो। दुबै औषधिहरू पनि समान रूपमा सुरक्षित पाए। यस समीक्षाले वयस्कहरू र बच्चाहरूमा different 85 विभिन्न अध्ययनहरू समावेश गर्दछ।
ibuprofen को कति मिलीग्राम तपाइँ एक पटक मा लिन सक्नुहुन्छ
जब यो पुरानो दुखाइ अवस्थाको लागि आउँदछ, आईबुप्रोफेन बढी प्रभावकारी देखाइएको छ। एक मा अध्ययन , आईपुप्रोफेन पुनरावृत्ति हुने माइग्रेन र ओस्टियोआर्थराइटिसको दुखाई उपचार गर्नका लागि एसिटामिनोफेन भन्दा बढी प्रभावशाली पाइएको थियो। अर्को अध्ययन समान परिणामहरू निष्कर्ष र पत्ता लगाए कि प्यारासिटामोल (एसिटामिनोफेनको अर्को नाम) ले ओस्टियोआर्थराइटिसको लागि एसिटामिनोफेन भन्दा राम्रो दुखाइ राहत र सहनशीलता थियो।
किनभने दुबै औषधिहरू फरक-फरक तरीकाले काम गर्दछन्, विभिन्न सर्तहरूको लागि एक भन्दा अर्कोलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पीडा व्यक्तिपरकको सहिष्णुतामा पनि व्यक्तिपरक र निर्भर हुन्छ। त्यसकारण, व्यक्तिलाई औषधिमा दिएको प्रतिक्रियामा आधारित पीडा राहत फरक हुन सक्छ। यदि तपाईलाई दुखाइ वा ज्वरो लाग्छ भने स्वास्थ्यसेवा पेशेवरबाट सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ।
एसिटामिनोफेनमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
एसिटामिनोफेन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र एसिटामिनोफेन बनाम आइबुप्रोफेनको लागत तुलना
एसिटामिनोफेन काउन्टरमा किन्न सकिन्छ र जेनेरिक र ब्रान्ड फारममा उपलब्ध छ। मेडिकेयर र प्रायः बीमा योजनाहरूले एसीटामिनोफेनलाई कभर नगर्न सक्छन् किनभने यसको प्रिस्क्रिप्सन बिना यसको व्यापक उपलब्धता हो। जेनेरिक एसिटामिनोफेनको लागि औसत नगद मूल्य $ ११.99 as सम्म हुन सक्छ। एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गरेर, तपाईं अधिक बचत गर्न सक्नुहुनेछ र जेनेरिक एसिटामिनोफेनको बोतलको लागि लागतलाई लगभग $ २ मा ल्याउन सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, मेडिकेयर र प्राय जसो बीमा योजनाहरूले आइबुप्रोफेनलाई समाहित गर्दछ। Ibuprofen जेनेरिक वा ब्रान्ड नाम औषधि को रूपमा उपलब्ध छ। आईबुप्रोफेनको लागि सामान्य नगद मूल्य १$ डलर जति हुन्छ। यो लागत एकलकेयर कूपनको उपयोग गरेर कम गर्न सकिन्छ। तपाईंले प्रयोग गरेको फार्मेसीमा निर्भर रहँदै, लागत २०० मिलीग्राम इबुप्रोफेनको बोतलको लागि करिब $ to सम्म कम गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हैन हो
मानक खुराक 325 मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू; २ ट्याब्लेटहरू प्रत्येक to देखि hours घण्टामा २०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू: १ देखि २ ट्याब्लेटहरू प्रत्येक to देखि hours घण्टामा
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ १ $ ०- $ २२
एकलकेयर लागत + २ + + + +
एसिटामिनोफेन र आइबुप्रोफेनको सामान्य साइड इफेक्टहरू
एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेनको साथ अनुभवी सबैभन्दा सामान्य प्रभावहरू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) साइड इफेक्टहरू समावेश गर्दछ। यी साइड इफेक्टहरूमा मतली, बान्ता, कब्ज, र पखाला समावेश छन्। दुबै औषधिहरूले टाउको दुख्ने, खुजली / चक्राउन, र चक्कर आउन सक्छ। इबुप्रोफेन एसिटामिनोफेनको तुलनामा ईर्ष्या र अपच हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
दुबै औषधिहरूको अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावहरूमा रक्तस्राव, ज्वरो, र घाँटी दुखाइ समावेश हुन सक्छ। औषधि सामग्रीहरूमा एलर्जीको प्रतिक्रियामा दाउरा, सास दुखाई, र छातीमा जकड़न समावेश हुन सक्छ। यदि तपाईंले यी प्रभावहरू अनुभव गर्नुभयो भने चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुहोस्।
मतली हो 4% हो %%-%%
बान्ता हो पन्ध्र% हो १%% -22%
कब्ज हो %% हो १% -१०%
पखाला हो १% -१०% हो १% -3%
टाउको दुखाई हो १% -१०% हो १% -3%
खुजली हो %% हो १% -१०%
ईर्ष्या हैन - हो %%-%%
चक्कर हो १% -१०% हो %%-%%
स्रोत: माइक्रोमेडेक्स ( एसिटामिनोफेन ), डेलीमेड ( आइबुप्रोफेन )
एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेनको ड्रग अन्तर्क्रिया
दुबै एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेनले वारफेरिन (कुमाडिन) सँग कुराकानी गर्न सक्दछ, साधारण रक्त पातलो। यी कुनै पनि औषधिसँग वारफेरिन लिदा रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ। मदिरापान गर्दै एसिटामिनोफेन वा आईबुप्रोफेनको साथ रगत पातलो गर्न र प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
एसिटामिनोफेनले क्षय रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक, isoniazid सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। आइसोनियाज़ीड लिनाले लिगरले कसरी एसिट्यामिनोफेनलाई प्रसोधन गर्छ यसले असर गर्छ र कलेजो बिगार्न सक्छ। फेनिटोइन र कार्बामाजेपाइन दुई एन्टिपाइलेप्टिक औषधि हुन् जसले एसिटामिनोफेनको साथ लिदा कलेजोमा हुने चोटपटकको जोखिम पनि बढाउन सक्दछन्।
इबुप्रोफेनले एसेटिनोफेन भन्दा बढि औषधीको साथ कुराकानी गर्न सक्दछ। एक NSAID को रूप मा, यो उच्च रक्तचाप औषधी जस्तै अन्य औषधि संग टाढा रहनु पर्छ किनभने यसले रक्तचापको स्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ। केहि एन्टीडिप्रेससन्ट्सले आईब्युप्रोफेनको साथमा लिदा रक्तस्रावको खतरा पनि बढाउन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास एसिटामिनोफेन इबुप्रोफेन
एस्पिरिन Antiplatelet हैन हो
आइसोनियाजिड एन्टिबायोटिक हो हैन
कार्बामाजेपाइन Antiepileptic हो हैन
फ्लुओक्सेटीन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) एंटीडिप्रेसन्ट हैन हो
डेसेभेन्फाक्सिन सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (SNRI) antidepressant हैन हो
Valsartan एन्टिहाइपरपोर्टिभ हैन हो
पेमेट्रेक्सेड अनटाइमेटोबोलिट हैन हो
लिथियम मूड स्टेबलाइजर हैन हो
साइक्लोस्पोरिन इम्युनोसप्रेसन्ट हैन हो
मँ कती प्रोबायोटिक एन्टिबायोटिक संग लिनु पर्छ
एसिटामिनोफेन बनाम आइबुप्रोफेनको चेतावनी
एसिटामिनोफेनलाई सामान्यतया राम्रोसँग सहन गरिन्छ। यद्यपि एसिटामिनोफेनको सिफारिश गरिएको खुराक भन्दा बढि लिनाले कलेजो बिग्रने जोखिम बढाउन सक्छ। एसिटामिनोफेन हेपाटाटोक्सिक वा कलेजोमा विषाक्तको रूपमा उच्च खुराकमा परिचित हुन्छ।
इबुप्रोफेनले एसिटामिनोफेनको भन्दा ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल र कार्डियोवास्कुलर प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याउँछ। सबै एनएसएआईडीहरू जस्तै, आईबुप्रोफेनको प्रयोगले पेटको अल्सरको जोखिम बढाउन सक्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जोसँग पेप्टिक अल्सर रोगको इतिहास रहेको छ। आइबुप्रोफेन सेवन गर्दा हृदयघात र स्ट्रोकको खतरा पनि बढ्न सक्छ, विशेषगरि हृदय समस्या वा उच्च रक्तचापको इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा। इबुप्रोफेनलाई कोरोनरी धमनी बाइपास ग्राफ्ट सर्जरीको अघि, समयमा, वा पछि दुखाइको उपचार गर्नबाट अलग रहनु पर्छ।
एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि एसिटामिनोफेन हुन सक्छ NSAID सम्बन्धित प्रतिकूल प्रभाव समयको साथ उच्च खुराकमा। यी प्रतिकूल घटनाहरूमा अल्सर, हार्ट अट्याक, र स्ट्रोक समावेश गर्दछ केही व्यक्तिहरूमा जो यी घटनाहरूका लागि पूर्वानुमानित छन्।
एसिटामिनोफेन गर्भावस्थाको लागि आइबुप्रोफेन भन्दा सुरक्षित मान्न सकिन्छ। जे होस्, यी औषधिहरू गर्भावस्थाको अवधिमा मात्र लिनुपर्दछ यदि लाभहरू जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्। एसिटामिनोफेन वा आईबुप्रोफेन सेवन गर्दा शिशुमा डक्टस धमनीकोठिमा समयपूर्व बन्द हुन सक्छ।
एसिटामिनोफेन बनाम आइबुप्रोफेनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
एसिटामिनोफेन भनेको के हो?
एसिटामिनोफेन एक ओभर-द-काउन्टर (OTC) एनाल्जेसिक र एन्टिपाइरेटिक हो। वयस्कहरू र बच्चाहरूमा हल्का देखि मध्यम दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। एसिटामिनोफेन नियमित-शक्ति र अतिरिक्त-शक्ति योगनहरूमा आउँदछ।
आइबुप्रोफेन भनेको के हो?
इबुप्रोफेन एक नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) हो जसले पीडा र ज्वरोको उपचार गर्न सक्छ। यो ओभर-द-काउन्टर र पर्चेको बलहरूमा आउँदछ। आइबुप्रोफेनको उच्च शक्ति अक्सर ओस्टियोआर्थराइटिस जस्तै पुरानो पीडा शर्तहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
के एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन उस्तै छन्?
होइन। एसिटामिनोफेन ब्राण्ड नाम टायलनोल द्वारा चिनिन्छ र दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्न अनुमोदित भयो। इबुप्रोफेन एडवल वा मोट्रिन ब्रान्ड नामबाट चिनिन्छन् र दुखाइ, ज्वरो र सूजनको उपचार गर्न अनुमोदित छन्। आईबुप्रोफेन ओटीसी र प्रिस्क्रिप्सन शक्तिहरूमा पनि आउँदछ।
के एसिटामिनोफेन वा आइबुप्रोफेन राम्रो छ?
इबुप्रोफेन एसिटामिनोफेन भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ दाह र पुरानो दुखाई अवस्थाको उपचारको लागि। इबुप्रोफेन ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथको उपचारको लागि एफडीए-अनुमोदित छ जबकि एसिटामिनोफेन यी सर्तहरूको लागि अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ। जे होस्, एसिटामिनोफेन सामान्यतया इबुप्रोफेनको सम्बन्धमा बढी सहन योग्य हुन्छ साइड इफेक्ट ।
के म गर्भवती हुँदा एसिटामिनोफेन वा आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
एसिटामिनोफेन गर्भवती महिलाहरूको लागि इबुप्रोफेन भन्दा सुरक्षित हुन सक्छ। प्रतिकूल प्रभावको जोखिमको कारण गर्भवती महिलाहरूमा आइबुप्रोफेनबाट अलग रहनु पर्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा कुनै पनि औषधी लिनु अघि स्तनपान गराउनुहुन्छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
के म एसिटामिनोफेन वा मदिराको साथ आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन। एसिटामिनोफेन वा आइबुप्रोफेनको साथ रक्सी पिउँदा साइड इफेक्टको जोखिम बढ्न सक्छ। रक्सीले कसीले हुने क्षति, अल्सर, र रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्दछ जब एसिटामिनोफेन वा आइबुप्रोफेनको साथ खान्छन्।
कुन कलेजोको लागि खराब हो - एसिटामिनोफेन वा आइबुप्रोफेन?
कलेजोको क्षति आइपुप्रोफेन भन्दा एसिटामिनोफेनसँग बढी सम्बन्धित छ। यो किनभने एसिटामिनोफेन कलेजोमा व्यापक रूपले मेटाबोलिज्ड वा प्रशोधित हुन्छ। आईबुप्रोफेनले कलेजोमा विरलै क्षति पुर्‍याउँछ र कलेजोमा ठूलो रूपमा प्रशोधन हुँदैन।
के यो एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेन सँगै राख्न सुरक्षित छ?
एसिटामिनोफेन र इबुप्रोफेन दुखाइ राहतको लागि सुरक्षित सँगै लिन सकिन्छ। अनुसन्धानले देखायो कि एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन केहि प्रकारको पीडाको उपचारका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छन् जब संयुक्त । यद्यपि यो आवश्यक छ कि डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्ने हुनाले दुबै औषधिहरूको अधिक मात्रामा सेवन गर्दा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।
मैले कसरी पहिचान गर्‍यो live र मासिक al मासिक डिस्फोरिक डिसअर्डर (पीएमडीडी) को साथ बस्छु।
के तपाइँ तपाइँको २० को दशक मा ल्याक्टोज असहिष्णुता को विकास गर्न सक्नुहुन्छ
कहिले सम्म यो एक प्रकोप खाली गर्न valtrex लिन्छ
तपाइँ mg०० मिलीग्राम ibuprofen हरेक hours घण्टा लिन सक्नुहुन्छ
फ्लू को के तनाव अहिले वरिपरि जाँदैछ
मतली र उल्टी को लागी के औषधि लिने